Barnaamijka Khidmadda Bixinta (Bixinta) wuxuu Bixiyaa Daryeel Caafimaad DHAMMAAN - Ururka Daryeelka Bulshada Barnaamijka Khidmadda Bixinta (Bixinta) wuxuu Bixiyaa Daryeel Caafimaad DHAMMAAN - Ururka Daryeelka Bulshada
Union Community Care waxay ku dalacdaa khidmadaha adeegyada daryeelka caafimaadka ee aan bixino, laakiin waxaa jira siyaabo badan oo lacag-bixineed oo kala duwan oo ka dhigaya adeegyadeen kuwo ay awoodi karaan bukaannada. Waxaan daryeelnaa bukaanada aan lahayn caymis, caymis ganacsi, Caawinaad Caafimaad, ama Medicare. Haddii aadan hubin in caymiskaaga caafimaad uu daboolayo adeegyadayada, fadlan wac 717-299-6371 oo weydii inaad la xiriirto Waaxdayada Biilasha.
Waa maxay Barnaamijka Sicir-dhimista Ujrada?
Barnaamijka qiimo dhimista khidmadda silitaanku waxa uu bixiyaa qiimo dhimis ama kharashka adeegyada caafimaadka iyo daryeelka ilkaha ee xarumahayaga. Barnaamijka qiimo dhimista khidmada silitaanku waxay diyaar u yihiin dhammaan kuwa aan caymisku haysan iyo bukaanka caymisku ku salaysan yahay dakhliga reerkooda iyo xajmiga.
Waxaan ku dabaqnaa qiimo dhimista kharashyada ballanta, lacagaha laga jarayo, ceymiska, iyo qoritaanka daawooyinka iyada oo loo marayo barnaamijka 340B. Dhammaan lacagaha kale waxay ku dhammaanayaan wakhtiga ballanta.
Bukaanka ku jira barnaamijkeena qiimo dhimista khidmadda sibidhka ee aan lahayn caymis caafimaad waxay bixin doonaan qiime baadhisyada caafimaadka, baadhista ilkaha, raajooyinka, iyo nadiifinta. Dhammaan lacagaha la bixinayo waxa la filayaa wakhtiga ballanta:
Iskeelka Miisaanka A: $ 25.00
Iskeelka Miisaanka B: $ 35.00
Iskeelka Miisaanka C: $ 45.00
Iskeelka Miisaanka D: $ 50.00
Sideen u dalban karaa Barnaamijka Qiimeynta Ujrada?
Bukaan-socodka waa inay wadaagaan tirada qoyskooda (ay ku jiraan xaaska iyo dhammaan dadka ku tiirsan) oo ay bixiyaan dukumeenti dakhliga dhammaan xubnaha qoyska.
Waxaad codsan kartaa Barnaamijka Qiimo Dhimista Sliding Fee inta lagu jiro isdiiwaangelinta ballan kasta ka hor intaadan buuxin codsiga ballankaaga xiga. U sheeg Khabiirka Helitaanka Bukaan-socodka inaad jeclaan lahayd inaad codsato Barnaamijka Qiimo-dhimista Sliding Fee maanta!
Maxaa loo xisaabiyaa sida dukumintiga dakhliga?
Foomka 1040 ee federaalka (laga soo celiyo cashuur celinta dakhliga), haddii lagu dabaqi karo (laga soo bilaabo sanadkii hore) ama
Hal bil oo jeegagga mushaarka ee hadda ah (mushaarka waa in uu ahaadaa 3 bilood gudahood) ama
Xaashida shaqo la'aanta (laga bilaabo sanadka hadda jira) ama
Warqad ka timid loo shaqeeyaha kuna taal warqad warqadeed (laga bilaabo sanadka hadda jira) ama
Warqadda abaalmarinta ama dheefaha. Tusaale: Macaashka SSI / SSDI (laga bilaabo sanadka hadda socda) ama
Hadaadan haysanin waxyaabaha kore, warqad warqad tixraac ah oo ka socota hay'ad 501 (c) (3). Tusaale: Kaniisad, Ururka United Way, iwm. (Laga bilaabo sanadka hadda ah)
Haddii aadan awoodin inaad bixiso mid ka mid ah foomamkan dukumiintiyada dakhliga, fadlan weydiiso xubin ka mid ah shaqaalaha Daryeelka Bulshada ee Ururka Bulshada caawimaad
Mudo intee la'eg ayaa Qiima dhimista Qiimeynta soconaysaa?
Bukaan-socodka waxay u baahan doonaan inay dib u codsadaan sannad kasta Barnaamijka Qiimo dhimista Lacagta Sliding.
340B Kaydinta Barnaamijka
Barnaamijka 340B wuxuu u baahan yahay Xarumaha Caafimaadka ee heer federaal, sida kuweena, si ay u maal galiyaan dhammaan kaydadka 340B daryeelka & adeegyada taas oo sii horumarinaysa himiladeena kicinta sinnaanta iyada oo loo marayo daryeelka caafimaad ee uu bukaanku hogaamiyo kaas oo soo dhawaynaya oo xoojinaya bulshooyinkeena anagoo isku darka jidhka, maskaxda, iyo wadnaha. Ka dib markii aanu siinay bukaanadayada helitaanka dawooyin la awoodi karo, oo ay ku jirto barnaamijkayaga foojarka farmashiyaha, waxaanu isticmaalnaa kaydadka 340B ee soo hadhay si aanu u bixino adeegyada maaraynta daryeelka iyo taageerada bulshada, oo ay ku jiraan isku xirka ilaha caafimaadka bulshada iyo adeegyada bulshada. dheeraad ah ka baro halkan.
Qiyaasta Iimaanka Wanaagsan
Qiyaasta rumaysadka wanaagsan waxay tusinaysaa inta aad ka bixin karto alaabta ama adeegyada daryeelka caafimaadka ee loo baahan yahay wakhtiga ballantaada. Intee in le'eg ayaad bixin kartaa waxay kuxirantahay macluumaadka la ogaaday waqtiga qiyaasta la sameeyay. dheeraad ah ka baro halkan.